Akụkọ - Ememme Oge opupu ihe ubi nke China dị nso, Johan na Jason si Australia na-efe efe ebe a
Oge Ememe Mmiri nke China dị nso, Johan na Jason si Australia na-efe efe ebe a
Oge Ememe Mmiri nke China dị nso, Johan na Jason si Australia na-efe efe ebe a. N'oge ọkọchị n'Australia ugbu a, ha na-eyi uwe elu dị mkpụmkpụ n'ime akwa ha. ha na-ewetara anyị ezigbo obi ụtọ, ọ bụ nnukwu ọrụ!
N'ime ụbọchị atọ na-arụsi ọrụ ike ha nọrọ ebe a, anyị tụlere n'ụzọ miri emi banyere nnukwu ọrụ ahụ, injinia anyị webatara usoro ịgbado ọkụ na ịkpụzi ngwaọrụ, gosipụtara ndị na-eweta ngwaahịa na igwe anyị gụnyere igwe ọhụrụ anyị ewughachiri maka ọrụ a, rụtụrụ aka isi usoro na isi ihe . Ezi nghota anyi banyere oru ngo a na eme ka onye ahia anyi nwee obi iru ala ma ju ya afo. Mkparịta ụka ahụ dị ezigbo mma, ọ bụ maka nnukwu m na Australia, anyị ga-eme ọtụtụ ihe magnet iji dochie ndị ahụ.
Igwe magnet bụ otu n'ime ngwaahịa ndị Stamina na-ahụkarị, a na-eji ya eme ihe na ụlọ ọrụ ndị na-egwupụta akụ, nnukwu ihe na-eme ka ihe dị ukwuu na ya sie ike, ọ na-esiri ike ma dị ize ndụ iji kpokọta igwe ndọta, ọfụma anyị nwere ọtụtụ ahụmahụ na ya. Anyị ịgbado ọkụ na machining usoro bụ nnọọ tozuru okè, anyị nzukọ ọrụ na ihe karịrị 2000 nnukwu nju bụ nke elu arụmọrụ na mma.
Edere nkwekọrịta ahụ naanị otu ụbọchị tupu ụbọchị ememme mmiri mmiri nke China, ndị otu abụọ nwere obi ụtọ na obi ụtọ, azịza ajụjụ niile na nsogbu teknụzụ niile meriri. Johan na Jason nwere ezigbo ntụkwasị obi na anyị, Stamina enyela ha ọtụtụ ụdị ngwaahịa na ọtụtụ afọ, yana ọnụ ala na ogo dị elu. Ha kwenyere na Stamina ga-arụ ezigbo ọrụ maka ọrụ a, n'agbanyeghị na ọ bụ n'ezie ihe siri ike.
Afọ 2020 yiri ka ọ bụụrụ anyị afọ pụrụ iche, ndị ọrụ anyị bidoro ezumike ememme mmiri anyị site n’abalị nke afọ ọhụụ, chi ejiela, mana anyị niile juputara n’ọ happyụ na olile anya. Agbanyeghị, ọ bụ ihe magburu onwe mmalite.